जनता समाजवादी पार्टी नेता राजेन्द्र महतोले दिए प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो चेतावनी – ramechhapkhabar.com
जनता समाजवादी पार्टी नेता राजेन्द्र महतोले दिए प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो चेतावनी
जनता समाजवादी पार्टी नेता राजेन्द्र महतोले संविधानमाथि ‘कू’ भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै महतोले सो कदम आफूहरुले नमान्ने बताएका हुन्।
‘यो विल्कुल संविधान विपरीत कदम हो। संविधानमाथि कू हो। संवैधानिक व्यवस्थाको विपरीत, संवैधानिक मूल्य मान्यताको विपरीत काम भयो’, महतोले भने।
उनले अहिलेको अवस्थामा संसद विघटन हुन नसक्ने बताए। ‘संविधानले संसद विघटनको केही परिस्थिति राखेको छ, त्यो अवस्था अहिले बनेको छैन। आफ्नो पार्टीको झगडाको सझाय संविधानलाई दिने? संसदलाई दिने? यो गलत भयो’, उनको भनाइ छ।
उनले प्रधानमन्त्रीको कदम गलत भएकाले त्यसको व्यापक विरोध जरुरी भएको बताए। ‘हामी विरोध गर्छौं। हामी मान्दैनौं’, उनले भने।
संविधानको कुन धारा अन्तरगत संसद विघटनको प्रस्ताव गरे ओलीले ?
काठमाडौं । राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने उद्देश्यले संविधानमा संसदको कार्यकाल ५ वर्ष राखिएको थियो । तर यस विपरित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका छन् ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकले संसद विघटन गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्पति समक्ष सिफारिस गरेको हो । नेपालको संविधानमा संसद विघटनसम्बन्धी प्रावधान प्रष्ट खुलाइएको छैन । संविधानको धारा ८५ को १ मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ’ भन्ने छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरि ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिध सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सक्ने जनाइएको छ ।